‘एनटीपी कलेजका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसीप र जब प्लेसमेण्टका राम्रा अवसर छन्’ |
21 Feb 2020 | शुक्रबार, ९ फागुन, २०७६
अन्तवार्ता आइतबार, २६ कार्तिक, २०७४
काठमाडौं मध्यबानेश्वरको काकत्यानी चोकमा रहेको एनटीपी कलेजले इन्टरनेशल टिचिङ युनिभर्सिटी अफ जर्जियाको सम्बन्धनमा बीएचएम अध्यापन गराउँदैं आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक्युभ्यालेन्टमा सञ्चालित बिएचमको यो अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री बढी ब्यवहारिक छ । डिप्लोमा कोर्स चलाइरहेको विपेक्स कलेजले यसको म्यानेजमेण्ट गरिरहेको छ, विपेक्सको एउटा शाखा सोल्टी र अर्को शाखा पोखराको लेक साइडमा समेत रहेको छ । एनटीपी कलेजका प्रिन्सिपल रमेश विष्टसँग एजुकेसन समाचारले कलेजको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीको प्रभावकारिता, इन्टर्न र जब प्यालेसमेण्टका अवसरलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः
एनटीपी कलेजबारे केही बताइदिनुहोस न?
एनटीपी कलेज सन् २०१४ मा स्थापना भएको हो । यसमा चार वर्षे होटल म्यानेजमेण्ट पढाइ हुन्छ । यसले इन्टरनेशन टिचिङ युनिभर्सिटी अफ जर्जियाबाट ४ वर्षे बीएचएमको सम्बन्धन ल्याएर नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट अप्रुभल लिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक्युभ्यालेन्ट पनि हामीले लिएका छौं । साथसाथै हामीले ५ वर्षदेखि विपेक्स कलेजमार्फत डिप्लोमा कोर्स पनि चलाइरहेका छौं । मुख्यगरी हाम्रो एनटीपी कलेज ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेण्टमै फोकस छ । कलेजको बिएचएमको यो दोस्रो ब्याच हो ।
नेपालमा विदेशी डिग्रीको प्रभावकारी के कारणले छ ?
नेपालका युनिभर्सिटीहरुले पनि विभिन्न डिग्रीहरु दिइरहेका छन् । नेपालमै पनि धेरै राम्रा कार्यक्रमहरु छन् । बाहिरको प्रभावकारिताको कुरा गर्ने हो भने भोलि नेपाली विद्यार्थी विदेशका कुनै पनि अर्गनाइजेसन काम गर्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ । तुलना गर्दा त्यहाँको राम्रो यहाँको नराम्रो भन्ने होइन्, तर विदेशमा नेपाली विद्यार्थीका लागि इन्टरनेशनल मार्केटमा जब गर्न जाँदा केही प्लस प्वाइन्ट हुन्छ । यसबाहेक कोर्समा केही नयाँ कुरा हुन्छ भने जब मार्केटअनुसार विदेशी युनिभर्सिटीले आफ्नो कोर्सहरुमा परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् ।
जर्जिया युनिभर्सिटीको कोर्स र नेपालका युनिभर्सिटीका कोर्सहरुमा तात्विक भिन्नता के देख्नुहुन्छ ?
नेपाली डिग्री र इन्टरनेशल डिग्रीमा मुख्य कुरा क्रेडिटको हो । यसबोहक जर्जिया युनिभर्सिटीको कोर्समा प्रायाक्टिललाई बढी फोकस गरिएको छ । हुनत नेपालका धेरै कलेजहरुमा पनि प्रायक्टिकल फोकस गरिएको छ । तर, हामीले प्रयाक्टिकलमा बढी फोकस गरेको र रिनाउन डिग्री भएकाले नेपाल ल्याएर सञ्चालन गरेका हौं ।
एनटीपी नै विद्यार्थीले किन रोज्ने ?
हामीसँग भएका दुई चार वटा कुराहरुलाई विद्यार्थीले हेर्ने हो । कलेजहरु त उही हुन् तर हामीले तीन वर्ष पढाइसकेपछि उसलाई इन्टर्नसीप ग्यारेण्टी गर्छौ । अहिले नेपालभरिकै एक दुई वटा कलेजबाहेक अन्य सबै कलेज टियु, पियु, केयुको जतिपनि विद्यार्थीहरु छन् हाम्रो विपिएक्स वाइ चाइना भन्ने कम्पनीले नै चाइना लग्ने हो । यस कलेजका सिइओ होलिड इनमा जिएम पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले एनटीपी रोज्नुको मुख्य कुरा इन्टर्नसीप ग्यारेण्टी छ नै प्लेसमेण्ट पनि हाम्रो कम्पनीले राम्रो स्टुडेन्टलाई सहयोग गर्छ । त्यसकारण एनटीपीमा आउँदा जबको ग्यारेण्टी हुन्छ ।
भनेपछि एनटीपीमा जब प्लेसमेण्टको सम्भावना बढी छ ?
एकदमै । किनभने, हाम्रो कलेजको वनर नै होलिडे इनमा जिएम हुनुहुन्छ । उहाँले नै यस्ता कुराहरु मिलाउनुहुन्छ । उहाँले चीनमा मात्रै होइन्, दुबई र मरिससमा पनि हामीले विद्यार्थी पठाउँछौं । नेपालबाट इन्टर्नमा स्पेन पठाउने नेपालको हामी पहिलो कलेज हो ।
इन्टर्नसीपको ब्यवस्था कस्तो छ ?
चार वर्षे डिग्रीमा तीन वर्ष नेपालमा पढ्ने एक वर्ष इन्टर्नसीपका लागि चाइना पठाउँछौं । त्यसका लागि कलेजको सिइओ सर नै चाइना होलिडे इन भएकाले सहज भइरहेको छ । उहाँले नै यहाँका विद्यार्थीहरुको इन्टर्नसीपदेखि लिएर जब प्लेसमेण्टसम्मको ब्यवस्था मिलाउनुहुन्छ । मुख्य गरी विद्यार्थीहरुलाई हामीले फाइभ स्टार होटलमै इन्टर्नका लागि पठाउँछौं ।
एनटीपीका विद्यार्थीले चीनका कस्ता—कस्ता ठाउँमा इन्टर्नसीपको मौका पाउँछन् ?
चीनमा हामीले विद्यार्थीहरुलाई एक वर्षको इन्टर्नसीपका लागि पठाउने हो । उनीहरुले त्यहाँका फाइभ स्टार होटल, फाइभ स्टार रिसोर्टहरुमा त्यहाँको होलिड इन, हिलट्न होटल, सांग्रिला, जे डब्ल्यु मेरियटजस्ता वल्र्ड वाइड चेन होटलहरुमा पठाउने गरेका छौं । त्यहाँ पठाउनुको उद्देश्य विद्यार्थीहरुले त्यहाँ गएर काम गरिसकेपछि उनीहरुले इन्टरनेशल एक्स्पोजर त पाउँछन् नै त्यसबाहेक ल्याङवेज सिक्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पछि त्यो वल्र्डवाइड चेन होटलको जुनसुकै देशको होटलमा काम गर्न जाँदा पनि विद्यार्थीहरुलाई सहज हुन्छ ।
डिप्लोमा र ब्याचलर कोर्स कति शुल्कमा पूरा गर्न सकिन्छ ?
डिप्लोमा भनेको भकेसनल सर्ट टर्म कोर्स हो । यो तालिमजस्तै हो, यो पढेर उनीहरुले भोलि इन्डष्ट्रीजमा जब गर्न सक्छन्, तर यो एकेडेमीक चाहिँ होइन् । ब्याचलर डिग्री चाहिँ एकेडेमिक कोर्स हो । यो डिग्रीको ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ शुल्क छ । डिप्लोमाको चाहिँ १ लाख ६० हजार छ । ब्याचलर्स डिग्रीको कोर्सका लागि रिमोट, द्वन्द्वपीडितलगायत सरकारले छुट्याएका आरक्षित कोटाहरुमा हामीले छात्रवृत्तिको ब्यवस्था समेत गरेका छौं ।
यसमा इन्टर्नसीपको शुल्क पनि समेटिएको छ ?
छैन् । इन्टर्नसीपका लागि जाने आउने टिकटको खर्च विद्यार्थी आफैले ब्यवहोर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अरु सबै ब्यवस्थापन खर्च हाम्रो हुन्छ । त्यहाँ गइसकेपछि होटलहरुले विद्यार्थीहरुलाई मोटिभेसनल पार्टका रुपमा महिनाको केही पैसा समेत दिन्छ । जुन २०/२२ हजार जति हुन आउँछ । इन्टर्नमा जाने विद्यार्थीका लागि लजिङ, फुडिङको ब्यवस्था होटलले नै गरेको हुन्छ ।
तपाईहरुका विद्यार्थीहरु अहिले कुनै राम्रा ठाउँहरुमा पनि काम गरिरहेका छन् कि ?
छन् । बीएचएम त हाम्रो कन्टीन्यु भइराख्या छ । डिप्लोका विद्यार्थीहरु चाइनामा जागिर गरिरहेका छन् । चीनको होलिड इन, सांग्रिला, दुबई, कतारमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरुले राम्रा ठाउँहरुमा काम गरिरहेका छन् ।
बीएचएमको स्कोप कस्तो छ ?
बीएचएमको स्कोप धेरै छ । किनभने यसको क्षेत्र होटलमात्रै होइन्, ट्राभल, टुरिज्म, हस्पिटल, एयरलाइन्स कम्पनीलगायतका ठाउँहरुमा राम्रो स्कोप छ । यसबाहेक आफ्नै विजनेश त भइहाल्यो । यो विषय भनेको फुल्ली स्कील्ड बनाउने विषय हो । हाम्रो कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरु बेरोजगार नबसोस भन्ने हाम्रो मुख्य उद्धेश्य हो ।
अन्तमा विद्यार्थीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कलेज भर्ना हुनुभन्दा अगाडि कलेजको हिस्ट्री, म्यानेजमेण्ट हेर्नुहोस्, कलेजले प्लेसमेण्ट कहाँ दिन्छ त्यो हेर्नुहोस् । कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरु कहाँ—कहाँ पुगेका छन्, विद्यार्थीहरुलाई जब प्लेसमेण्ट गर्ने कलेजको क्षमता छ कि छैन् भन्ने कुरा हेर्नुहोस् । मुख्य कुरा कलेजले इन्टर्नसीप र प्लेसमेण्ट कस्तो दिइरहेको छ कुन—कुन होटलमा दिएको छ त्यो कुरा हेर्न जरुरी हुन्छ ।